कतारका दलाल/कहिलेसम्म चुस्छौ यसरी गरिबका पसिना ? | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
कतारका दलाल/कहिलेसम्म चुस्छौ यसरी गरिबका पसिना ?
Posted on मार्च 7, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	अखण्ड भण्डारी तपाईंलाई लाग्ला कतार गएका नेपाली त्यहींका अरबी वा कुनै विदेशीको कम्पनीमा काम गर्छन् । हो, ठीकै ठान्नुभयो । तर, एउटा कुरा मिलेन- काम गर्ने कम्पनी विदेशीका भए पनि हाजिर गर्ने र तलब बुझ्ने कार्यालय अधिकांश नेपालीकै छन् । कतारमा ठूला-ठूला र नाम चलेका अधिकांश नेपालीको कामै स्वदेशी श्रमिक आपूर्ति गर्ने हो । उनीहरू त्यहाँका कम्पनीमा सम्झौता गरी ठेक्कामा कामदार लैजान्छन् । त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा पैसा उठाउँछन् र झिनो तलब दिन्छन् । त्यो पनि सबैले समयमा दिँदैनन् ।
कहिले अनेक बहानामा नदिई सताउँछन् । कहिले अलपत्र पार्छन् । कहिले एउटा काममा भनी पुर्‍याएर अर्कै जटिल काममा पेलाउँछन् । कागज एउटा थमाउँछन्, काम-दाम अर्कै
पार्छन् । श्रमिकका पासपोर्ट र अन्य कागजात कब्जा गरी सताउनु सताउँछन् । विदेशीका कम्पनीमा पनि गई हैरान गर्छन् । अनि भाग्न बाध्य पार्छन् र अवैध बनाउँछन् । नेपालीलाई त्यसरी आपतमा पार्ने अरू कोही हुँदैन, नेपाली नै हुन्छन् । नेपाली समुदायमा मै हुँ भन्दै हिँड्ने, कथित प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिबाटै बढ्ता यस्ता घटना हुन्छन् ।
भर्खरै यस्तै एउटा घटना भयो । कतारका अति धनी र ‘प्रतिष्ठित’ एक नेपालीलाई दूतावासले बोलायो । उनी जाँदा त्यहाँ केही श्रमिक पुगिसकेका थिए । नेपाली राजदूत र श्रम सहचरीले उनलाई स्वदेशी श्रमिकलाई तलब नदिएको र भिसा नवीकरण नगरेकोबारे सोधे । उनले टार्न खोजे र आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे । जब दूतावासले ‘श्रम अदालत पठाउने’ चेतावनी दियो, मजदुरका समस्या सुल्झाउन उनी राजी भए ।
कतारमा जसले श्रमिकलाई सताउँछ, श्रम अदालतको नाम लिनासाथ उसको सातो उड्छ । किनकि, यो अदालतले श्रमिकलाई न्याय दिएकै हुन्छ । तर यो कुरा कमै श्रमिकलाई थाहा छ । दूतावासले पनि ‘अन्तिम अस्त्र’ का रूपमा मात्र यसलाई प्रयोग गर्छ । नेपाली श्रम सहचरी ध्रुवप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले तोक्ने क्षतिपूर्ति अति धेरै भएकाले बाध्य भएर रोजगारदाताले समस्या सल्टाउँछन् । ‘भरसक यतै मिलाउँ भन्ने लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सीधै अदालत पठाउँदैनौं ।’ भरसक दूतावासले पनि ‘मिलाउँछ’ भन्ने पीडकहरूलाई थाहा छ । उनीहरूलाई यो पनि ज्ञान छ- मजदुर भरसक दूतावासै पुग्दैनन् । अझ थाहा छ- वाक्क भएपछि कमाएको एक पैसै नलिई घर र्फकन पनि तयार हुन्छन् । र्फकने बेला टिकटका लागि संस्था वा व्यक्तिलाई हारगुहार गरेर पनि उड्न सक्छन् । त्यही बुझेर गर्नुसम्म शोषण गर्छन् ।
त्यसैले दूतावासलाई मेरो आग्रह छ- अब हात्तीलाई तर्साउन नाङ्लो ठटाउने होइन, पुल्ठो बालेर लखेट्नुपर्छ । श्रम अदालत पठाउने धम्की दिने होइन, पठाउनुपर्छ । शोषणको पराकाष्ठा भोगेको नेपालीलाई क्षतिपूर्तिको गतिलो मुठो हातमा थमाइदिनुपर्छ । तब पो देशले साँच्चिकै दूत पठाएको महसुस हुनेछ । धन्य कतारका नियम-कानुन र कार्यान्वयन गर्ने निकाय- पैसा र तागतका भरमा कोही अन्यायमा पर्न पाउँदैन । अर्कातिर कतारमा कामदारका लागि प्रशस्त अवसर छन् । कुनै कम्पनी बन्द भयो वा कुनै कारण नेपाली अप्ठ्यारामा परे भने लैजानेले चाहे सजिलै अर्को काम दिलाउन सक्छ । तर, ऊ त्यसका लागि पहल गर्दैन । बरु नयाँ अवसरका नाममा देशबाट नयाँ व्यक्ति झिकाई अर्को सिकार बनाउँछ ।
कम्पनीले राम्रो पैसा दिएका छन् । कतार सरकारको नियम कडा छ । रोजगारदाताले मध्यस्थकर्तालाई ठग्ने कुनै डर छैन । इमानको कमाइ राम्रो हुने ठाउँमा किन बेइमान भएर स्वदेशीका पसिना चुस्छौ मित्रहरू ? परदेशमा गई आफ्नै गाडी चढ्नेलाई त हाम्रो देशमा ठूलो मान्छे भनिन्छ, तिमीहरू त्यो हैसियतमा पुगेर पनि किन गतिछाडा भइराखेका छौ ?
देशका अनपढ बन्धुबान्धवलाई रोजगार दिनु, विदेश पुर्‍याउनु र रेमिट्यान्स पठाउनु अमूल्य योगदान हो । यत्रो महान् कामको जस लिन छाडेर किन व्यर्थै ‘मानव तस्कर’ को बिल्ला पहिरन्छौ ? किन ‘मानव तस्कर’ लायकै काम गरिरहन्छौ ? नेपाली श्रमिकको श्रमको ठूलो हिँस्सा त खान्छौ-खान्छौ, अर्काको भूमिमा पुर्‍याई किन अलपत्र पार्छौ ?
हो, हामी गरिब भएरै मरुभूमिको ५० डिग्रीमा पसिना चुहाउन गइरहेका छौं । जाँदा साहुको ३६ प्रतिशत ब्याजमा एक लाख लिएको हुन्छ । २ वर्षमा तिर्न महिनाको ३ हजार ब्याज र ४ हजार साँवा चाहिन्छ । सात हजार सकिन्छ । ‘दलाल’ ले दिएको बाख्राको खोरजस्तो ठाउँमा सुतेर र कुपोषित खाना खाएर र्फकंदा पनि महिनाको २-४ हजारसम्म बचाउन गाह्रो छ । तैपनि तिमीहरू बोलेको नपुर्‍याई किन नानाथरी दुःख दिन्छौ ? उल्टो-उल्टो काममा लगाई किन कम्पनी छाडी ‘अवैध’ हुन बाध्य पार्छौ ? बदमासी गर्छ दलाल, अवैध हुन्छ श्रमिक । अनि, वर्षौंका लागि मरुभूमिमा भासिन्छ । उसको के अपराध थियो र ऊ अवैध भयो ? अवैध काम गरेर फसाउने व्यक्तिचाहिँ कार चढेर टाई ढल्काउँदै हिँड्ने, सोझो-सीधा अनि एक लाख फसाएको गरिबचाहिँ अबैध भई घर र्फकनै नपाउने ?कहिलेसम्म चुस्छौ यसरी गरिबका पसिना ?
Filed under: समचार « विपाशा बासु,सेक्सी नम्बर एक नयाँ नेपाल क्लब कुवेतले दुई टीम भलीबल खेलाडीको छनोट »